Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 18
Nepali New Revised Version, Job 18
1 तब बिल्‍दद शुहीले यसो भनेर जवाफ दिए:
2 “यी भाषणहरूलाई तपाईंले कहिले बन्‍द हुन्‍छ? समझदार हुनुहोस्‌, र हामी कुरा गर्न सक्‍नेछौं।
3 हामीलाई किन पशुझैँ व्‍यवहार गरिन्‍छ? र तपाईंको विचारमा हामी मूर्खहरू ठहराइन्‍छौं?
4 तपाईं जसले रीसमा आफूलाई छिया-छिया पार्नुहुन्‍छ के तपाईंको खातिर पृथ्‍वीलाई त्‍यागिदिने? अथवा पहराहरू तिनीहरूका ठाउँबाट हटाउनु?
5 “दुष्‍टको बत्ती निभाइन्‍छ, त्‍यसको आगोबाट फेरि कुनै ज्‍वाला निस्‍कँदैन।
6 त्‍यसको पालमा ज्‍योति अँध्‍यारो हुन्‍छ, त्‍यसको बत्ती निभ्‍छ।
7 त्‍यसको पाइलाको शक्ति कमजोर हुन्‍छ। त्‍यसको आफ्‍नै युक्तिले त्‍यसलाई लड़ाउँछ।
8 त्‍यसका खुट्टाले त्‍यसलाई पासोमा धकेल्‍छ, र त्‍यो जालमा भौँतारिन्‍छ।
9 त्‍यसका खुट्टा पासोमा जेलिन्‍छ, पासोमा डोरीले त्‍यसलाई कसेर बाँध्‍छ।
10 त्‍यसको लागि गलपासो भूइँमा लुकाइएको छ। र जाल त्‍यसको बाटोमा तेर्सिएको हुन्‍छ।
11 डरले त्‍यसलाई चारैतिर घेर्छ, र कदम-कदममा त्‍यसलाई खेद्‌छ।
12 विपत्ति त्‍यसको निम्‍ति भोकाएको हुन्‍छ, त्‍यो लड्‌दा दुर्घटनाले त्‍यसलाई पर्खिरहेको हुन्‍छ।
13 त्‍यसले त्‍यसको छालाको अंशहरू खाइहाल्‍छ, मृत्‍युको पहिलो सन्‍तानले त्‍यसको हात-खुट्टा खान्‍छ।
14 त्‍यसको घरको सुरक्षाबाट पनि त्‍यसलाई तानेर निकाल्‍छ, र त्‍यसलाई त्रासको राजाकहाँ लैजान्‍छ।
15 त्‍यसको पालमा आगोले वास गर्छ, त्‍यसको घरमा जलिरहेको गन्‍धक छर्किएको छ।
16 त्‍यसका तलतिरका जराहरू सुक्‍छन्‌, त्‍यसका माथिका हाँगाहरू ओइलाउँछन्‌।
17 पृथ्‍वीबाट त्‍यसको सम्‍झना लोप हुन्‍छ, संसारमा त्‍यसको नाउँनिशानै रहनेछैन।
18 त्‍यो उज्‍यालोबाट अँध्‍यारोमा धपाइन्‍छ, र संसारबाट निकालिन्‍छ।
19 आफ्‍ना मानिसहरूका बीचमा त्‍यसको आफ्‍नो कुनै सन्‍तान छैन। आफू एक पल्‍ट बसेको ठाउँमा कोही बाँचेका हुनेछैनन्‌।
20 पश्‍चिमका मानिसहरू त्‍यसको दशा सुनेर छक्‍क पर्नेछन्‌, पूर्वका मानिसहरू डरले काम्‍नेछन्‌।
21 दुष्‍ट काम गर्नेहरूको घर यस्‍तै हुनेछ, परमेश्‍वरको वास्‍ता नगर्नेहरूको घर यस्‍तै हुनेछ।”
Job 17 Choose Book & Chapter Job 19